’Re nọ n’ebe kwesịrị ekwesị maka mini jack.Ka ọ dị ugbu a ị maraworị na, ihe ọ bụla ị na-achọ, ị doro anya na ịchọta ya EPONT.anyị na-ekwe nkwa na ọ bụ ebe a na EPONT.
Ọ bụ ebe obibi. Ọ gaghị ewepụta mmetọ dị ka olu, na-eduru ya, ma ọ bụ ihe ndị NKPL dị n'ụwa mgbe a na-ekpochapụ ya..
Nzube anyị na-enye ndị kasị mma mini jack.n'ihi na anyị ogologo oge ahịa na anyị ga-ifịk ifịk na-akwado ndị ahịa anyị na-enye irè ngwọta na-eri uru.
Obere karama Jack 12 na ezigbo ọnụahịa - Elont
A na-ekenyekwa karama na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie - Epont, ngwaahịa anyị, Spain, ndị ahịa UK, Canada na Werc.ous ndị ahịa OEM Ndị na-emekọ ihe ọnụ na ụgbọ ala, anyị enweelarị ọrụ ọ bụla na ụgbọ ala.
KASLA BACK 32T
Ka karama anyị Jack 32t, bụ ogo dị mma, ngwaahịa agafeela OA, GS& Asambodo tuv nke European Union. Ogo ngwaahịa anyị bụ eziokwu na ntụkwasị obi. A na-ere ha nke ọma na ahịa ndị Europe na nke America. Ngwaahịa niile na-eji ọgwụ mgbochi kompeni gburugburu ebe obibi na - 45 Celsius hydraulic, yabụ enwere ike iji ha na mpaghara oyi. Biko tụkwasị obi anyị Epont. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ elont, anyị ga-aga n'ihu na-eme nke ọma
ọhụrụ ikuku karama Jack
Jack na-eme ọhụụ, ngwaahịa anyị agafeela OA, GS& Asambodo tuv nke European Union. Ogo ngwaahịa anyị bụ eziokwu na ntụkwasị obi. A na-ere ha nke ọma na ahịa ndị Europe na nke America. Ngwaahịa niile na-eji ọgwụ mgbochi kompeni gburugburu ebe obibi na - 45 Celsius hydraulic, yabụ enwere ike iji ha na mpaghara oyi. Biko tụkwasị obi anyị Epont. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ elont, anyị ga-aga n'ihu na-eme nke ọma
Everont sistem bụ nchịkọta nke engine dị iche iche, ala Jack 3t, Jack Inffry nke bụ ahụ e ji arụ ọrụ maka nyocha, mmepe na ahịa.1. Anyị nwere asambodo: Anyị nwere asambodo tozuru oke2. Teknụzụpụta teknụzụ: nyocha na-aga n'ihu na ihe ọhụrụ3. Afọ ojuju ndị ahịa: Nyepụta ngwaahịa na-eju afọ
na GS 20T karama Jack
Anyị karama Jack 20T, na-top àgwà, ngwaahịa na ha agafeela OA, GS& Asambodo tuv nke European Union. Ogo ngwaahịa anyị bụ eziokwu na ntụkwasị obi. A na-ere ha nke ọma na ahịa ndị Europe na nke America. Ngwaahịa niile na-eji ọgwụ mgbochi kompeni gburugburu ebe obibi na - 45 Celsius hydraulic, yabụ enwere ike iji ha na mpaghara oyi. Biko tụkwasị obi anyị Epont. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ elont, anyị ga-aga n'ihu na-eme nke ọma